Aqoon Kororsi – Radio Jowhar
August 28, 2017	364 Comments 1,160 Views
April 16, 2017	3 Comments 298 Views
Wararka ka imanaya deegaanka Biyo-cadde ee gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in lagu arkay duleedka Biyo-Cadde meydka labo ruux oo dhalinyaro ah iyo mid kale oo dhaawac ah. Raggaan ayaa la sheegay inay saarnaayeen baabuurta rakaabka qaada ee loo yaqaan caasiga waxaana ay ku soo jeedeen deegaanka Biyo-Cadde oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM. Mid ka mid ...
Dhaawacii Gudoomiyaha degmada Wanlaweyn oo lagu eedeey ciidanka dowladda
March 26, 2017	1 Comment 822 Views
Maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ku eedeeyay ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan Shabeelaha in ay ka dambeeyeen dhaawacii Shalay loo geystay Gudoomiyaha Degmada Wanlaweyn. Gudoomiye ku xigeenka dhanka Maaliyadda maamulka Gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle oo la hadlay Risaala ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay xabado ku fureen Gudoomiyaha Degmada Wanlaweyn ,islamarkaana Xabadahaasi ay ...
Galmudug oo soo bandhigtay gaari qarax laga soo buuxiyay iyo raggii watay
March 19, 2017	2 Comments 314 Views
Saraakiisha ciidamada Nabad Suggida Maamulka Galmudug, ayaa Magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee Galmudug waxa ay ku soo bandhigeen gaari caasi ah oo lagu qabtay waxyaabaha qarxa. Gaarigaan ayaa lagu qabtay inta u dhaxeysa Magaalooyinka Caabudwaaq iyo Xanan-buure oo ka tirsan Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Somaliya. Nabad Suggida Galmudug waxa ay soo bandhigeen labo ruux oo la sheegay inay wateen ...
Gabar aabaheed ku heshay facebook sheeko cajiib ah iyo sawiro
August 17, 2016	39 Comments 1,066 Views
Gabar Soomaali ah balse hooyadeed ay Ruush tahay ayaa afartan sano kadib heshay aabaheed kadib markii ay codsi dhigtay barta bulshada ee Facebook. Sayid Axmed Sharif oo ah Farxiya aabaheed ayaa kamid ahaa arday Soomaaliyeed oo waxbarsho u joogtay dalka Ruushka,xilligaa oo uu ku bartay Farxiya hooyadeed. Hase yeeshee markii uu bilowday dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia oo dowlada Soomaaliya xiriirka ...
Baaritaan lagu ogaaday ragga iyo haweenka dunida ugu dhaadheer iyo kuwa ugu gaagaaban
July 26, 2016	12 Comments 703 Views
Baaritaan la sameynayay muddo hal qarni ah ayaa lagu ogaaday in ragga dunida ugu dhaadheer ay yihiin dadka Dutchka halka haweenka ugu dhaadheer dunidana ay yihiin dumarka Latvia.
Daawo Sawirada Yaxaas Ka Dhameeyay Xoolaha Beeralayda Florida
April 6, 2016	23 Comments 831 Views
Beeralayda dalka Maraykanka gaar ahaan degmada Okeechobee,Florida ayaa ku guuleystey inay dilaan yaxaas dhererkiisu uu gaarayo 4.572miter culeyskiisana lagu sheegay 362kg.
Daawo dhibaatada ay leedahay in ay noqoto qaxooti
April 1, 2016	646 Comments 3,207 Views
Dalka Siiriya oo ka mid ahaa dalalka caalamka ee dhinacyo badan ka hormaray ayaa dhibaato ku habsatay kadib markii dagaal sokeeye uu ka dilaacay. Malaayiin ruux ayaa dalkaasi ka carartay dagaalada sokeeye ee ka dhacaaya iyagoo miciin biday inay u qaxaan wadamada Yurub iyo dalal kale oo caalamka ka ahba. Mid kamid ah dhibaatoyika soo wajahay qaxootiga ayaa waxaa ka ...
Daawo Sawirada Dalxiise Jecel Inuu Ku Nasto Dalalka Dagaalada Caanka Ku Ah
March 31, 2016	138 Comments 1,444 Views
Muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska Andy Drury ahna 50 sano jir ayaa xilliyada uu fasaxa yahay waxa uu dalxiis ku tagaa wadamada dunida ay dagaaladu ka dhacayaan sida dalka Soomaaliya,Afghanistaan, CIraq iyo Pakistan. Dadka qaarkii waxa ay xilliyada fasaxooda ku qaataan xeebaha iyagoo ku nasta, hase yeeshee Andy Drury ayaa waxa ay ka duwan tahay inta badan dadka caalamka ee ...
Weligaa Ma Aragtay Xiintoyda Oo Aysan Biyo Ka Soo Dhacayn(Sawiro)
March 18, 2016	259 Comments 1,967 Views
Waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii qalalaya wabiga Shabelle oo sanadihii la soo dhaafay loogaga bartay fatahaado iyo inuu waxyeeleeyo dalagyada kala duwan ee ay beeralayda abuurtaan. Sanadkan ayaa waxa uu noqday ku dhowaad soddon sano kadib in xiintoyda aysan biyo ka soo dhicin, waxaana maalin walba u daawasho taga dadweynaha magaalada Jowhar iyo nawaaxigeeda. Xiintyda ayaa noqotay meel maalin ...